Amalsweden | RELIABLE MONEY TRANSFER
Ku soo dhawaaw Amal Express. Amal Express waa xawaalad u adeegta dadka soomaliyeed u leh adeega macamiisha iyo lacag dirista.
Tababarkii sanadlaha ahaa ee Amal Express
Ma xiisaynaysaa inaad wakiil u noqotid Amal Express. Amal Express waa hormuudka xawaaladaha Sweden, ka mid noqo shirkad leh qorashe wanaagsan..
Qofkasta wuxuu u baahanyahay hanti meel u taal oo hadii ay wax ku dhacaan uu kala soo baxo .
Ku bixi lacagta Swish!
Ku soo dir lacagta Bankgiro ama Plusgiro!
Hadii aad u baahantahay in aad wax ka ogaato adeegyada Amal Express nagala soo xariir lambarkaan.
Xarunta dhexe (maalin kasta 10-18)
La xariir xafiisyada Amal Express
Shaqooyinkii ugu danbeeyey oo Amal Express ay bulshada u qabatay.
Bandhigga Amal Express Göteborg
Amal Express Sweden ayaa magaalada Göteborg bandhig ku saabsanaa horumarinta dhaqaalaha qoyska ku qabatay. Qodobadda shirka waxaa ka mid ah adeegyada Amal Express ay macmiisha u hayso, adeegyo casri ah oo Amal Bank diyaarisay sida diaspora acount, online banking, marwo saving iyo xudun xir.
Daahfurkii Buugga Eraybixinta Caafimaadka
TABABARKII WAKIILADA KA HAWLGALA AMAL EXPRESS EE DALKA SWEDEN
Gothenburg:-Masuuliyiinta Amtel oo dadwaynaha usoo bandhigey saamiyo
Bandhig Adeega Amal Express iyo Kafaalo Magazine
Waa bandhigii Amal Express ee magaalooyinka Växjö iyo Alvesta.
Bandhiggii Amal Express Sweden ee magaalada Borås
Kulan Trollhättan – Amal Express Sweden & Kafaalo Magazine
Qoraaladii ugu danbeeyey ee Shirkada.
Maclumaadka looga baahanyahay macmiilka
Shirkadaha ka shaqeeya lacagaha waa masuuliyadooda in ay markasta aqoonsadaan macmiisha diraya lacagaha. Macaamiilka waxaa laga rabaa aqoonsiga kaarkiisa , magaca, cinwaanka,
ADEEGA AMAL EXPRESS
Macmiilka kasta oo ku xiran Amal Express wuxuu helayaa faa`iddoyin badan, lacagta oo wakhti yar lagu qaato, amaano iyo adeeg hufan. Waxaan ka caawinaynaya macaamiisha sida lacagaha biilasha ah looga.. read more
Ku soo dhawaaw Amal Express. Amal Express waa xawaalad u adeegta dadka soomaliyeed xafiisyana ku leh Africa, Europe, Asia, Amerika, Australia iyo meelo badan oo kale. Shirkaddu waxay xooga saarta.. read more
Amal Express Waa shirkad caalami ah oo u adeegta dadka oo dhan
Amal Express Ekonomisk förening står under Finansinspektionens tillsyn
© Copyright 2022 Amalsweden